Nwere ike iju gị anya nke B2B Referrals na-emechi | Martech Zone
Igwe ahia na ụlọ ọrụ B2B ọ bụla ga-adị mma, kpoo mmanụ nke ọma, ma na-agba ọsọ ọsọ ọsọ iji mee ka ọdịiche dị na ala. Ekwenyere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ata ahụhụ naanị n'ihi na ha dabere na azụmaahịa ọhụrụ site na oku oyi, mana ndị ọrụ ha enweghị ezigbo ndị otu ebe iji rụọ ọrụ siri ike iji nweta ihe ịga nke ọma.
Otu onye isi na nso nso a kesara m Ahịa na Ahịa Ahịa maka sọftụwia na-aga nke ọma dị ka ụlọ ọrụ ndị ọrụ site na Insight Venture Partners - na ọnụọgụ nwere ike ịju gị anya. Ọ na-ewe ọrụ dị ukwuu iji nweta onye ahịa ọhụrụ. You nweghị ike inwe otu ndị na-anaghị abata ọrụ kwa ụbọchị ma na-atụ anya ime mgbanwe.
Ma ọ bụ ị nwere ike? E nwere otu isi mmalite nke azụmahịa B2B nke na-atụgharị karịa nke ọ bụla ọzọ ị nwere ike ghara iji uru.
Mgbe ị na-enyocha ọnụego mgbanwe site na ọwa, otu ọwa na-apụta dị ka onye mmeri doro anya. Ndị ahịa na ndị ọrụ na-ezo aka na-ewepụta 3.63% ọnụego mgbanwe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa ọwa na-esote-ebe nrụọrụ weebụ nwere ọnụego ntụgharị 1.55%. Social nwere ọnụego ntụgharị 1.47% na ọchụchọ akwụ ụgwọ 0.99%. Ọwa ndị kasị njọ na-arụ ọrụ bụ ndepụta ndọtị na ọnụọgụ ntụgharị nke 0.02%, ihe omume nwere ọnụọgụ ntụgharị 0.04% yana mkpọsa email na 0.07% ntụgharị ntụgharị. Gilad Raichstain, Mbido.
Ọ na - eju anyị anya mgbe niile ka anyị na - agwa ndị mmekọ ihe ngwọta na ọtụtụ n’ime ha enweghị mmemme ga - akwụghachi ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa aha ha. Ndị ọrụ gị bụ (ma ọ bụ kwesịrị ịbụ) ndị mmeri maka azụmaahịa gị - na - akwalite gị n'ofe netwọkụ ha. Ndị ahịa gị bụ akụ ọzọ dị ịtụnanya. Have nwere ozi email nke na-aga site n'oge ruo n'oge na-ajụ ma ọ bụrụ na ha ga-achọ ịkọwa onye ọ bụla? You na-enye ụfọdụ onyinye ma ọ bụ ego maka ndị na-ezigara gị? Ihe data a nwere ike ime ka ibido!
Ma ọ dịkarịa ala, ịnwe peeji ọdịda nke na-ewepụta isi iyi nwere njikọ pụrụ iche kesara n'etiti ndị ọrụ gị, ndị ahịa gị, na ndị mmekọ gị kwesịrị ịdị elu na ihe kacha mkpa gị. Nke a ga - enyere gị aka soro ma kwụghachi ụgwọ kachasị mma gị!
Mbibi na-emelite atụmanya gị na nkwukọrịta ndị ahịa na ndekọ CRM kwesịrị ekwesị, na-ahapụ gị ka ị jikwaa pipeline gị nke ọma ma na-azọpụta gị na ndị otu gị oge bara uru na ọrụ dị egwu. Implisit jiri algorithms nke na-egosipụta email ọ bụla, kọntaktị na ihe omume kalenda ma dakọtara ya na ohere ziri ezi - 100% na-akpaghị aka.
Tags: b2bb2b benchmarkb2b ntugharib2b ahịaGilad Raichstain kwurummegbu
Inesbọchị Valentines 2015 oyiyi
Chaị ọ mara mma nke ukwuu. Described kọwara ihe niile n'ụzọ dị mma. Daalụ
Aug 20, 2015 na 10:53 PM
Doug, M nyere iwu Ntuziaka mmemme n'etiti m otu afọ a (2015). Ihe kachasị mma m mere. Ọ bụ a mara mma dị mfe mmemme. Mgbe otu n'ime ndị otu m wetara onye ahịa ọhụrụ na pọtụfoliyo anyị, ana m akwụ onye ọrụ ahụ ụgwọ 5% nke mkpokọta webụsaịtị. Yabụ, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ha zoo aka na mkpokọta $ 10,000 webụsaịtị, ha ga - enweta ego $ 500. Ndị otu m ọ na-amasị mmemme a? Duh! Ee, ha hụrụ ya n'anya.
Aug 21, 2015 na 1:02 PM
Nke ahụ dị mma Greg! Anyị hụrụ mmemme ndozi. Fọdụ ndị chere na ọ bụ omume dị omimi, mana ụlọ ọrụ na-akwụ ndị ahịa ahịa oge niile iji nyere aka na-achụ nta ego business gịnị kpatara na ị gaghị akwụ ndị mmekọ na ndị ọrụ gị ụgwọ?